EyeThupha ngo-2020-Funda ukuRhweba
Inyanga: Agasti 2020
Umhlalutyi uxela kwangaphambili ukuba uhambo oluya ezantsi- i-11,000 yeedola nge-Bitcoin lusondele
Ukuhlaziywa: 31 Agasti 2020
I-Bitcoin (BTC) iyaqhubeka ngamandla 'amatye' kwiseshoni yangoMvulo. Nangona kunjalo, ngaphandle kwendlela engagungqiyo, iinkunzi zeBitcoin zikwazile ukukhusela ukuma kwazo nakweyiphi na intshukumo engezantsi.
Ngasekupheleni kweveki ephelileyo, imali ye-cryptocurrency yafumana amandla, eyithumela kwinqanaba le-11,600 leedola kodwa yadibana kwangoko nokuthontelana okunamandla okanye iibhulukhwe ezimfutshane kwanyanzeleka ukuba iye kwindawo yemfuno ye- $ 11,100. Iinkunzi zikwazile ukuwukhusela loo mgca kwaye bawuthumela kwinqanaba elitsha elijikeleze i- $ 1975 namhlanje.
Ngaphandle kokubonisa amandla kwicala leBitcoin, omnye umhlalutyi ukholelwa ekubeni singaphinda sibuyele kwicala eliphantsi kungekudala. Ucacisa ukuba i-BTC ngoku ijongene nokuchasana okunzima kudityaniswa nobutyebi obuninzi kwindawo ephantsi- yeedola ezili-11,000. Ukholelwa ukuba i-cryptocurrency ebekiweyo kufuneka 'icofe' le mali ngaphambi kokuba kuqatshelwe nantoni na. Oko kwathethi, ulindele ukuba ibhere libaleke kufutshane nekota ngaphambi kokuba iBitcoin inyuke inyuke.
Umhlalutyi ucacisile ukuba indawo esezantsi- yeedola ezili-11,000 igcwele ngamanqanaba okuphelisa izikhundla ezixhonyiweyo kwaye ucofe ezi zithuba zinexesha elide kunokunika ipetroli yokunyuka okuphezulu kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
Amanqanaba aphambili eBTC ukuze ubukele
Ngexesha lokushicilela, iBitcoin ithengisa kwinqanaba le- $ 11,670. Imali ye-cryptocurrency ibonakala ngathi ingene kwisigaba sokudityaniswa kwezi yure zidlulileyo njengoko iinkunzi zeenkomo zisilele ukucacisa ukunganyaniseki okuyi- $ 11,800.
Okwangoku, iBitcoin ibisenza imilo ephezulu okwethutyana ngoku, ibonisa ukuba iinkunzi zeenkomo ikakhulu zilawula. Ixabiso okwangoku likumkhombandlela omncinci kwaye licebisa ukuba ukubuyela kwinqanaba le- $ 11,800 kwinqanaba elikufutshane lisondele.
Iyonke Intloko yentengiso: $ 377 billion
Intloko yeBitcoin yeNtengiso: $ 215 billion
Isalathiso se-BTC Dominance: 57%
tags Bitcoin, BTCUSD, iindaba
Ixabiso leBitcoin SV ngoMeyi lingaqala ngokuHamba ngokuHamba ngetyala le- $ 198 kunye ne- $ 185 yenqanaba lokubamba
Uhlalutyo lwamaxabiso eBitcoin SV-Agasti 31
Ingqekembe inokuqala ngokuhamba xa kunokwenzeka inqanaba lokumelana ne- $ 198 kunye nenqanaba lokuxhasa kwi- $ 185. Inqanaba lokumelana elingaphezulu kwenqanaba lama- $ 198 linokufunyanwa kwi- $ 217 kunye ne-237 lexabiso lexabiso. Kwicala elisezantsi lentengiso, amanqanaba enkxaso aphambili anokufumaneka kwi- $ 185, $ 179, nakwi- $ 134.
Intengiso ye-BSV / USD
Amanqanaba okumelana: $ 198, $ 217, $ 237
Amanqanaba enkxaso: $ 185, $ 179, $ 134
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-Bitcoin SV i-bearish. Kukho umahluko omncinci okanye omncinci kwixabiso le-BSV, nangona abathengisi besabambe imarike. Uxinzelelo lwe-bearish lityhale ixabiso ukuya kwinqanaba lokuxhasa kwi-185 yeedola ngo-Agasti 27 kunye nethemba labarhwebi lokuba ixabiso lingawela ngaphantsi kwenqanaba. Kuyamangalisa ukubona inqanaba lokufuna kwi-185 yeedola ibambe ixabiso kwaye iinkunzi zeenkomo zanyusa ixabiso ukubuyisa inqanaba lokumelana ne- $ 198.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BSV, nge-31 ka-Agasti
Ixabiso lizama ukubuyela umva kwinqanaba le- $ 198. Kwakhona kuthengiswa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA, ebonisa ukuba iibhere zisabambe intengiso. Ingqekembe inokuqala ngokuhamba xa kunokwenzeka inqanaba lokumelana ne- $ 198 kunye nenqanaba lokuxhasa kwi- $ 185. Inqanaba lokumelana elingaphezulu kwenqanaba lama- $ 198 linokufunyanwa kwi- $ 217 kunye ne-237 lexabiso lexabiso. Kwicala elisezantsi lentengiso, amanqanaba enkxaso aphambili anokufumaneka kwi- $ 185, $ 179, nakwi- $ 134.
I-BSVUSD inyusa kwitshathi yeeyure ezi-4. Kwakukuntshukumo ye-bearish kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ingqekembe yafumana inkxaso kwinqanaba leedola ezili-185. Iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso elikhankanyiweyo kwaye lityhale ixabiso lokungena kwii-EMA ezimbini, nazo zizamile ukophula inqanaba lokumelana ne- $ 198 kodwa iibhere ziyakwala ukuhamba. Ixabiso liyadityaniswa kwindawo yexabiso le- $ 198.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-BSV, nge-31 ka-Agasti
Isalathi samandla esihlobo sikhomba kwicala elingaphantsi kwinqanaba lama-50 ukubonisa uphawu lokuthengisa. Ixabiso lingaqhekeka kwinqanaba leedola le-198 ukuveza ixabiso ukuya kwinqanaba lama-217.
tags BSV, Marketing, Uhlalutyo Technical
Uhlalutyo lwamaxabiso egolide-Agasti 31
IGolide (i-XAU / i-USD) inyukele phezulu ngoMvulo ngaphandle kokungonelisi ngokwaneleyo kwintengiso ngenxa yeholide yebhanki yase-UK.
Ezinye izimvo ze-bearish zivela kwi-Fed namhlanje emva kokuba u-Bostic ethe ukubuyela kwimeko yezoqoqosho kuyenzeka kodwa kuhamba kancinci. Kwakhona, uFed's Clarida ukhanyise ngakumbi ngesimo seFed esithi "inqanaba lentswela-ngqesho ngokwalo kunye nokungabikho kwamaxabiso ayizukubangela ukunyuka kwamaxabiso." Ukuba le meko ihlala ingatshintshanga kwintlanganiso yeFed ngoSeptemba, igolide inokuphinda ibone ukuzuza.
Okwangoku, ukuthembela kwangoko ngaphezulu kwedatha elungileyo ye-PMI yaseTshayina ka-Agasti kuye kwaphela kwimarike ngokukhawuleza. Oku kunokubonwa kutshintsho olubukhali kumngcipheko wokutya wehlabathi, okomeleze imfuno yegolide kwithuba elikufutshane. Imvakalelo yokuchasana nomngcipheko yomelezwa kukudonswa kancinci kwangaphakathi kwi-US Treasury bond.
Nangona kunjalo, ngaphandle kweemeko ezintle, ukuphakama okubonwe kwigolide bekuswele amandla okulandela, kwaye iinkunzi zeenkomo azikaqiniseki. Oko kwathethi, kuya kuba bubulumko ukulinda ikhefu elinamandla ngaphezulu kwendawo yokubonelela nge-1977 ngaphambi kokulindela nayiphi na irali ebalulekileyo.
Igolide (XAU) yeXabiso lokuQikelela - nge-31 ka-Agasti
Amanqanaba okubonelela: $ 1977, $ 1983, kunye ne-$ 2000
Amanqanaba okufuna: $ 1940, $ 1923, kunye ne-$ 1909
Igolide ihleli kakuhle kwingingqi yethu yepivot ($ 1983-60) njengoko kuchaziwe kuhlalutyo lwakusasa. Okwangoku, kubonakala ngakumbi nangakumbi ukuba iinkunzi zeenkomo, endaweni yeebhere, ziya kuwuphumelela lo mdlalo. Oko kwathiwa, ukuqhekeka kwe-bullish kulindeleke kwixesha elisondeleyo njengoko phezulu kubonakala ngathi "yindlela yokunganyangekiyo" okwangoku.
IJamani 30 (DE30EUR) iqala kwakhona ukuHamba emva emva kokujongana nokwaliwa okunamandla kwinqanaba le-13200
IJamani 30 (DE30EUR) yexesha elide: Ukuma
Isalathiso siboshwe phakathi kwamanqanaba 12400 kunye no-13200. Zonke ukunyuswa kwexabiso kupheliswa kwinqanaba le-13200. Isalathisi siye saguquka ukususela ngoJuni. Isalathiso siyawa kwaye senza ezantsi.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukunyuka okuphezulu. Isalathiso sikwinqanaba lama-58 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kubonisa ukuba imarike ikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50. Isalathiso ngoku siyenyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisecaleni. Ixabiso lenza ukunyuka okuphezulu kodwa lijongana nokwaliwa kwinqanaba le-13200. Imakethi ngoku iyatshintsha phakathi kuluhlu lwamaxabiso. Ukuhamba kwexabiso akukho ndlela icacileyo.
Iimarike zingaphantsi kwe-50% ye-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba emacaleni zibonisa ukurhweba ecaleni
I-DE30EUR isatshintsha-tshintsha phakathi kwamanqanaba 12400 kunye ne-13200. Isalathiso sisezantsi emva kokuvavanya uluhlu lwamaxabiso aphezulu. Isalathiso asikabikho kwinqanaba langoku lamaxabiso.
I-EUR / CHF iRange-Bound, ubuso bokwaliwa kwinqanaba le-1.0780
Amanqanaba okuGxila aphambili: 1.0800, 1.0900, 1.1000
Amanqanaba enkxaso aphambili: 1.0600, 1.0500, 1.0400
I-EUR / CHF yeXabiso lexesha elide iTrend: Ukurola
I-EUR / CHF isatshintsha-tshintsha phakathi kwenqanaba le-1.0740 kunye ne-1.0840. Ixabiso liyenyuka kumanqanaba asezantsi wentengiso kodwa ijongene nokuchasana kokuqala kwinqanaba eliphezulu. Ukunyuka okwangoku kujongene nokuxhathisa kwinqanaba le-1.0780. Esi sibini sikwisenzo sexabiso.
I-EURCHF-itshathi yemihla ngemihla
Iibini zikwinqanaba lama-53 leNdawo yamaXabiso aMandla aNxulumene naMandla ixesha eli-14. Kuthetha ukuba imarike ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambekele phezulu. Ibonisa ukonyuka okwangoku.
I-EUR / CHF yeXesha eliPhakathi leTrend: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini siyatshintsha phakathi kwenqanaba le-1.0740 kunye ne-1.0840. Ixabiso lihle ngaphezulu kwenqanaba le-1.0740 kwaye laqala kwakhona ukudityaniswa. Imakethi ikwixabiso lentengo. Ixabiso liyadityaniswa kwinqanaba lexabiso eliphantsi. Ukuqhawuka kwicala elingaphezulu kunokwenzeka.
Iintsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zihamba emacaleni zibonisa indlela esecaleni. Isibini singaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Abathengisi bayavela ukutyhala amaxabiso ezantsi
I-EUR / CHF ikwindlela esecaleni kodwa kunokwenzeka ukuba inyuke. I-uptrend yangaphambili yexesha elifutshane njengoko amaxabiso eqhubeka kwakhona ezantsi. Kubonakala ngathi ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka kwakhona.
I-USD / JPY Drops ukuya kwiNqanaba 105.23 kwaye iQhubeka nokuHamba phezulu
Isibini se-USD / JPY okwangoku sihamba ecaleni. Ukusukela ngoJulayi i-Yen ibirhweba phakathi kwamanqanaba e-105.00 kunye ne-107.00. Okwangoku, esi sibini sinyuka saya kwinqanaba le-107. Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, amanqanaba aphambili emarike awasayi kwaphulwa.
I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zithambeka ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni. I-Yen okwangoku ikwinqanaba lama-49 le-Index yamandla aDibeneyo. Oku kubonisa ukuba imarike ikummandla weDowntrend kwaye ungaphantsi komgangatho ophakathi 50.
I-USD / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Ukutshintsha
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sihamba ecaleni. Namhlanje, imarike iya phezulu. Umzimba wekhandlela obomvu uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-0.382 yeFibonacci. I-Yen iya kuphakama kwaye ifikelele kwinqanaba eliphezulu le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci. Ngamanye amagama, intengiso iya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-107.72.
I-USD / IPY-4 Itshathi yeYure
Imakethi okwangoku ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Abathengi bavela kwindawo ethe kratya kwintengiso. Ibonisa umqondiso wokunyusa. Ii-SMAs zikwathambeka ngokuhamba ecaleni.
I-USD / JPY kukuhamba ecaleni. I-Yen okwangoku inyukela kwinqanaba lamaxabiso aphezulu. Ngokwesixhobo seFibonacci, esi sibini siya kuphakama kwaye sifikelele kwinqanaba lokwandiswa kwe-2.618 okanye kwinqanaba le-107.72.
Ukunyuka okuPhambili kwiNgcaciso yokuGcina iGolide kwiXesha eliFutshane
Igolide (i-XAU / i-USD) ebhalwe ezantsi kwiseshoni yakuqala yase-Europe ngoMvulo kwaye irekhode isezantsi imihla ngemihla kwi- $ 1954.
Isinyithi esimthubi asinakho ukubambelela kwisantya saso esikhuthazayo ukusuka ngolwesiHlanu, esadubula saya kwinqanaba laso langaphambili elijikeleze indawo yokubonelela nge-1977. Nangona kunjalo, umngcipheko wokutya okumandla kwimarike ye-equities yayiyeyona nto iphazamisayo kwimfuno yesibheno segolide esikhuselekileyo.
Uvakalelo lomngcipheko wehlabathi luqiniswe yimveliso elungileyo yaseTshayina kunye neenkonzo ze-PMI ezikhutshwe ngoMvulo. Idatha ivuselele ithemba phakathi kwabatyali mali malunga nokubuyiselwa okuqinileyo kwezoqoqosho kwindyikitya yokufa yeCoronavirus.
Kwakhona, i-goodish bounce kwi-dollar yase-US (i-DXY) namhlanje ifake uxinzelelo olungaphezulu kwe-bearish kwimpahla yeedola. Nangona kunjalo, ukuma kwiveki ephelileyo kwimeko yeFed kunokugcina iinkunzi zeedola ze-USD zingabi ndlongondlongo kwixesha elikufutshane, elinokunceda isinyithi esingavumiyo ukudibanisa okanye ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Usihlalo we-Fed uJerome Powell, kwintlanganiso ephelileyo eyayilindelwe kakhulu nguJackson Hole Symposium, wabhengeza ukuba ibhanki ephambili ithathela ingqalelo ukutshintsha komgaqo-nkqubo ukudala indawo ethe kratya yokunyuka kwamaxabiso ukujikeleza ngelixa intswela-ngqesho izinzile.
Oko kwathiwa, abathengisi baya kujonga ukuphuma okunamandla kweli nqanaba ngaphambi kokubeka nayiphi na imali yokubheja.
Igolide iphinde yangena kwi- $ 1983- $ 1960 pivot / indibaniselwano kwaye ikhefu lokuphela kwalo mmandla linokuthintela irali. Okwangoku, ukwehla kwiveki ephelileyo kwaxhaswa ngamandla kukunyuka komgaqo kwakhona, kubonisa ukuba eli nqanaba libalulekile ukuba amabhere anqwenela ukuthatha amaxabiso asezantsi.
Oko kwathethi, sinokubona ukuphinda-phinda kweli nqanaba kwixesha elikufutshane, elinokuthi linyanzelise ixabiso phezulu.
I-EURUSD yandisa ukuThutha okuPhezulu kwinqanaba elidlulileyo kwi-1.1900 Phambi kweDatha
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURUSD-Agasti 31
I-EURUSD iyaqhubeka nokugcina i-traction idlulileyo kumanqaku e-1.19, iphinda iphinde iphinde ibuye kwi-band ye-1.1883 / 80 okanye iphantsi kwemihla ngemihla emva kwentshukumo esezantsi kwangoko. Esi sibini sineenzuzo ezingaphezulu kwamanqaku e-1.19 ukuya kwiiveki ezidlulileyo, ukujonga iindawo eziphakamileyo zemihla ngemihla ngaxeshanye kunye nokuqalisa kwakhona icala elifanelekileyo ngeveki.
Amanqanaba okumelana: 1.1980, 1.1965, 1.1940
Amanqanaba enkxaso: 1.1750, 1.1685, 1.1606
Kwiveki ephelileyo, i-EURUSD ivele ngaphaya kwesakhiwo esihamba phambili seentsuku ezininzi kwaye yaqhubeka nokubanga uphawu lwe-1.19 nangaphaya, apho ngoku ifuna ukudibanisa. Esi sibini ngoku sinyuke nge-0.24 yepesenti kwinqanaba le-1.1932 kwaye inyathelo elingaphaya kwenqanaba 1.1965 (2020 ephezulu ngo-Agasti 18) inokujolisa kwi-1.1996 (yomelele) kwindlela eya kwinqanaba le-1.2032.
Kwelinye icala, inkxaso elandelayo imi kufutshane nenqanaba le-1.1750 exhaswa linqanaba 1.1709 (ngeveki ephantsi ngo-Agasti 12) kwaye kwinqanaba lokugqibela i-1,1695 (ezantsi ngoJulayi 27). Logama nje inqanaba lokumelana ne-1.1422 liguqule inkxaso ibambe, oku kunokuhlala kwimeko oyifunayo.
Kwi-EURUSD, uluhlu lokurhweba luyaqhubeka kwaye ukuthambeka kwe-intraday kuhlala kungathathi hlangothi. Ukonyuka okungaphezulu kukuxhasa kunye nokwaphula inqanaba le-1.1965 kunokubuyisa ukukhula okupheleleyo ukusuka kwinqanaba le-1.0635. Ngokubhekisele kwimeko ephezulu kwi-4 yeyure ye-RSI, nangona kunjalo, ukophula inqanaba le-1.1709 kunokubonisa ukongezwa kwexesha elifutshane.
Ama-oscillator exeshana abonisa ngakumbi ukuba ukubambeka okuhle kuyenyuka. Ukulungiselela i-intraday bias inokutshintshelwa kwicala elisezantsi (ngoku kwinqanaba le-1.1606 ethe tyaba yenqanaba). Ukuba abathengisi baphinda bavela, izithintelo zokuqala zinokuvela kwimigca yenkxaso ethe tyaba yexesha elisondeleyo kwinqanaba le-1.1852 kunye nele-1.1806 ngokwahlukeneyo, ngaphambi kwenqanaba le-1.1750.
Ixabiso lesilivere: XAGUSD Indlela yokuLwa nokuXhathisa okuMncinci kuHlelele
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Agasti 31
Ukuqala kwenyukela kwelona nqanaba liphezulu ukusukela nge-18 ka-Agasti, amaxabiso esilivere abuyela kwinqanaba leedola ezingama-27.87 ngexesha leseshoni yangoMvulo yaseYurophu. Nangona kunjalo, isinyithi esimhlophe sidanyaza i-1.30% yeenzuzo ngelixa sinyuka usuku lwesibini ngokulandelelana. Nangona kunjalo, icala elisezantsi lesilivere libonakala linyanzelisa ngokungabikho kwabathengi bexesha elide, njengoko indlela yeXAGUSD yokunganyangeki ihlala kwicala elingezantsi.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 30.00, $ 29.50, $ 28.15
Amanqanaba enkxaso: $ 27.15, $ 26.50, $ 25.00
I-XAGUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Ngexesha lokushicilela, indawo leyo ithengisa kakuhle ngaphezulu kwe-MA 5 kunye ne-MA 13 kwinqanaba le- $ 27.84, ejonge ukubuyisela ukumelana okuthe tyaba okubekwe kwinqanaba le- $ 28.15. Ngenxa yoko, iinkunzi zeenkomo zinokulinda ikhefu elicacileyo eliphakathi kwenyanga ka-Agasti ejikeleze i-28.50 yenqanaba lokungeniswa okutsha. Ngokwenza njalo, iqondo eliphezulu lenyanga ngoku elikufutshane ne- $ 29.85 kunye ne- $ 30.00 amanqanaba aya kuba kwii-radars zabo.
Okwangoku, ikhefu elisezantsi le-MA 5 kunye ne-MA ye-13 yamanqanaba e- $ 27.00 yommandla inokubangela ukwehla kwenqanaba lesilinganiso sokujolisa kwiveki ephelileyo ephantsi kwinqanaba le- $ 26.00. Abathengisi baya kuthi ke bajolise kwinqanaba eliphantsi le- $ 25.00 yenqanaba ukuba uxinzelelo olusezantsi luqinise.
Ukusuka kumbono wexesha elifutshane lobuchwephesha, isinyithi esimhlophe sawela phantsi njenge- $ 27.57 yenqanaba ngexesha lezorhwebo laseYurophu, lihlaba ngokuHamba nge-avareji yesi-5, emva koko kwinqanaba leedola ezingama-27.80 njengoko lisondela kuMndilili wokuHamba nge-13 kwindawo eyi- $ 27.50.
Esi sibini simele ukufumana inkxaso kwinqanaba le-27.15, kwaye ukuntywila ngaphezulu kungayithatha kwinqanaba elilandelayo leedola ezingama-26.50. Esi sibini simele ukuhlangabezana nokuchasana okokuqala kwinqanaba le-28.15 yeedola, kwaye ispike ngaphandle sinokuyityhalela kwinqanaba elilandelayo lokuchasana ne- $ 29.50.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin Cash (BCH): I-BCH iqala kwakhona kwi-Uptrend, kwiMizabalazo yokuTsibela ngaphezulu kwe- $ 280 yeNgxaki
I-BCH ibuyisa ngaphezulu kwe- $ 260 ephantsi kodwa ijongene nokwaliwa kwi-280 ephezulu yeedola
Ingqekembe iya kufikelela kwixabiso ekujoliswe kulo le- $ 366 ukuba ngaba ukunganyanzelwa kwe- $ 366 kwaphuliwe
Ixabiso langoku: $ 278.20
Intengo yeNtengiso: $ 5,147,952,181
Umthamo wokuThengisa: $ 1,140,152,311
Utshintsho lwexabiso le-Bitcoin Cash (BCH) ngo-Agasti 31, 2020
Nge-25 ka-Agasti, iibhere zaphula inkxaso ye-280 yeedola ukuya kwi- $ 270 ephantsi. Emva kokuphinda ubuye kwi-280 ephezulu yeedola, yehle yaya kuthi ga kwi-260 yeedola. Iinkunzi zeenkomo zenza iinzame ezibi zokutyhala ingqekembe iye kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Namhlanje, i-BCH ithengisa nge- $ 278 ngexesha lokubhalwa. I-crypto ijongene nokwaliwa kwi-280 ephezulu yeedola njengoko abathengi bezama ukutyhala ingqekembe iye kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili. Ingqekembe iya kufezekisa ukunyusa amaxabiso ukuba iinkunzi zeenkomo zityhala ingqekembe engaphezulu kwe- $ 280 yokuchasana okanye ii-EMA. I-BCH iya kuphakama kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziselwe. Kwelinye icala, ukuba iibhere ziyaqhekeka ngaphantsi kwenkxaso yangoku, ingqekembe iya kuwa i $ 320 isezantsi.
I-BCH inyukele kwinqanaba le-48 ye-Index ye-Relative Strength period 14. Ingqekembe ikwi-downtrend zone kwaye ingaphantsi kwe-50. Ixabiso lizama ukophula ngaphezulu kwe-SMA yeentsuku ezingama-21. Ukuba yaphuka ngaphezulu kwee-SMAs, i-crypto iya kuphinda iqhubele phambili ukuya phezulu. Okwangoku, i-BCH isokola ukuqhekeza kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili.
I-BCH ibuyisa ngaphezulu kwe- $ 260 yenkxaso kodwa ijongene nokwaliwa kwindawo ephezulu ye- $ 280. Ngomhla ka-Agasti 1 uptrend, i-BCH yaxhathisa kwi- $ 320, kwaye ingqekembe yabuyela kwinqanaba eliphantsi. Umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Oku kuthetha ukuba ukuxhathisa kwe- $ 320 kunokwenzeka ukuba yaphulwe kwaye ingqekembe iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 leFibonacci. Ngamanye amagama, i-crypto iya kufikelela kuma-366 eedola aphezulu.